Muqayiliintii Holand oo u soo firxaday Ingiriiska Qaad la’aan awgeed(CEELYEELAD) – SBC
Muqayiliintii Holand oo u soo firxaday Ingiriiska Qaad la’aan awgeed(CEELYEELAD)
Posted by editor on Janaayo 11, 2013 Comments
Iyadoo ay maanta ay tahay jimcihii ugu horeeyey ee wadanka Holand qaad laga waayo ayaa qaarka kamida Soomaalidii kunool wadankaas Holand waxay u dareereen Salaatul Jimo iyadoo ay magaalooyinka qaarkood sida Amsterdam iyo Rotterdam ay maanta ka jiraan Allebariyo badan oo dadka qaarkood xoolo qasheen iyagoo ducaysanaya ilaaheyna kabaryaya in uusan qaad danbe kasoo deign wadanka Holand.
Dhanka kalena bulshada qaar kamida ayaa waxay si isdaba jooga uga soo degeyaan dekedaha maraakiibta iyo garoomada diyaaradaha ee wadanka ingriiska kuwaasoo ka kasoo hayaamay guryahoodii,reerahoodii ,ubadkoodii iyo dalkii ay degenaayeen kadib markii qaad laga waayey Holand ayay iyaga oo ceelyeelad ah kusoo qulqulqulayaan wadankan ingiriiska.
Masuuliyiinta Waaxda Socdaalka wadankan ingiriiska oo aan qadka taleefanka ku waraysanay ayaa noo xaqiijiyey in 5 tii maalmood oo lasoo dhaafay uu siyaaday 80% dadka Soomaalida ah oo si isdaba jooga usoo galaya wadankan ingiriiska kana imaanaya Holand ,masuuliyiinta ayaa intaas kudaray inay ka walaacsan yihiin qaar kamida dadkaas oo isku deyaya inay qaadka ka saaraan ingriiska si sharci daro ahna ku geeyaan wadanka Holand.
Dadkaas Soomaaliyeed ee ceelyeeladka ah ayaa waxay waxay markiiba beegsadaan iyagoo qamaam ah goobaha lagu qayilo halkaasoo buuqa iyo sawaxanka kadhacaya daris badani qaati kataagan yihiin, waxaa kaloo kor u kacay luuqadaha kala duwan ee looga hadlayo marfishyada dhexdooda.
Dowlada ingriiska oo iyadu go’aan kasoo saari doonta qaadka bishan janaayo dhamaadkeeda ayaa arintani waxay ku sii dhiiro galinaysaa inay gebi ahaanba ka madnuucaan qaadka wadankooda isagoo hada ah wadanka kaliya ee reer galbeedka ah oo qaadka si sharci ah looga daaqo. Iyagoo ka walaacsan hadii ay sidaan ku sii socoto in ingriisku noqon doono marfish weyn oo Soomaalida Qaarada yurub oo dhan ku qayisho.
Hadaanu nahay bahda la dagaalanka qaadka waxaan muqayiliinta reer holand ugu baaqaynaa inaysan badaha soo jiirin iyagoo raadinaya mijin jaad ah, waxaanu leenahay ku nagaada guryihiina ilaahey u mahadnaqa idinka joojiyey Suntii la idinku dileyey. Ogaadana wali taariikhdu ma sheegin lamana arag lamana Maqal qof intuu qaad waayey waashey oo kadaray oo shaqo belay oo foolxumaadayoo ilkihiina kasii bur-bureen.
Abukar Awale (Qaad diid)
Gudoomiyaha Ladagaalanka Qaadka